प्रेम आले जस्ताले गर्दा नेपाल र नेपाली कलाकारको शिर निहुरेको छः वरिष्ठ समाजसेवी हेम थापा – PathivaraOnline
Home > विचार > प्रेम आले जस्ताले गर्दा नेपाल र नेपाली कलाकारको शिर निहुरेको छः वरिष्ठ समाजसेवी हेम थापा
admin April 5, 2022 विचार 0
काठमाडौं । अमेरीका वसोवास गर्दै अउनु भएका वरिष्ठ समाजसेवी हेम थापाले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले गरेको विदेशी कलाकार सलमान खानसँगको भिडियो कल माथि आपति जनाएका छन् ।
उनले केन्द्रीय मन्त्रीले एउटा विदेशी कलाकारलाई भिडियो कल गरेर नेपाल र नेपाली कलाकारको शिर निहुरेको आफ्नो फेसबुक स्टाटस मार्फत बताए । ‘केन्द्रीय मन्त्रीले एउटा विदेशी कलाकारलाई भिडियो कल गरेर ‘म त हजुरको ठुलो फ्यान हो नि’ भन्नु भनेको नेपाल र नेपालीको शिर निहुरिनु हो । नेपाली कलाकारको अपमान भएको ठान्छु म’ उनले भने ।
मन्त्री आलेले जनताको मन्त्री पद ओगटेर बसेको पनि उनले बताए । ‘कुनै देशको जिम्मेवार पदमा बसेर यो हर्कत गर्न सुहाउदैन र नैतिकताले पनि नदिने बताए । नेपालको पर्यटन र प्रबर्द्धनको लागी भनेर देशको एउटा मन्त्रीले नै यति चासो दिएर करोडौं खर्च गरेर किन विदेशी कलाकार ल्याइन्छ त ? एउटा प्राइबेट कम्पनिले गर्न लागेको कार्यक्रममा मन्त्रीले नै यति चासो दिनु भनेको विदेशी प्रति लम्पसार पर्नु नै हो ।’ उनले भने ।
नेता र पार्टीलाई भोट र भिड बटुल्न मात्र नेपाली कलाकार चाहिने भन्दै उनले आरोप लगाए। नेपालका कुनै पनि मन्त्रीले सलमान खानलाई दिएको सम्मान नेपालका कलाकारलाई दिने हो भने हाम्रो कलाकार क्षेत्र कहाँ पुग्ने थियो होल अहिले ? हाम्रा नेपाली कलाकारको मनोबल कति बड्ने थियो होला ? भन्दै उनले प्रश्न समेत गरे ।
विदेशीलाई भगवान मान्नेले घरकालाई शत्रुताको ब्याबहार गरेको भान भएको पनि उनले महसुस गरेको बताए।
‘केन्द्रीय मन्त्रीले एउटा विदेशी कलाकारलाई भिडीयो कल गरेर म त हजुरको ठुलो फेन होनि भन्नु भनेको नेपाल र नेपालीको शिर निहुरेको छ । नेपाली कलाकारको अपमान भएको ठान्छु म । प्रेम आले सर जनताको मन्त्री पद ओगटेर बस्नु भएको ब्याक्ति हुनुहुन्छ । कुनै देशको जिम्मेवारि पदमा बसेर यो हर्कत गर्न सुहाउदैन । नैतिकताले पनि दिदैन ।नेपालको प्रर्यटन र प्रबर्द्धनको लागी भनेर देशको एउटा मन्त्रीले नै यति चासो दिएर करोडौ खर्च गरेर किन विदेशी कलाकार ल्याइन्छ त ? एउटा प्राइबेट कम्पनिले गर्न लागेको कार्यक्रममा मन्त्रीले नै यति चासो दिनु भनेको विदेशी प्रति लम्पसार पर्नु नै हो । नेता र पार्टी लाई भोट र भिड बटुल्न चाहि नेपाली कलाकार चाहिन्छ । नेपालका कुनै पनि मन्त्रीले सलमान खान लाई दिएको सम्मान नेपालका कलाकार लाई दिने हो भने हाम्रो कलाकार क्षेत्र कहाँ पुग्ने थियो होल अहिले ? हाम्रा नेपाली कलाकारको मनोबल कति बड्ने थियो होला ? विदेशीलाई भगवान मान्ने ले घरका लाई शत्रुताको ब्याबहार गरेको भान भएको छ । नजिको तिर्थ सधै हेला पर्छ भन्थे हो रहेछ ।’
म २१ वर्ष को भये बारम्बार शारी”रिक सम्ब”न्धको प्रस्ताव आउँछ राम्रो होकी न राम्रो हो
बिहानै सल्यानबाट आयो जिप दुर्घटनाको दुःखद खबर, भाइको मृत्यु, दाजु घाइते